डचटाउन मुख्य सडकहरूमा दान गर्नुहोस् • DutchtownSTL.org
का लागि दाता बन्नुहोस् डचटाउन मुख्य सडकहरू! प्रत्येक डलर डचटाउन मुख्य सडकहरु लाई हाम्रा बासिन्दाहरु, ब्यापार मालिकहरु, र अन्य हितधारकहरु सबै को लागी एक संपन्न डचटाउन को निर्माण को हाम्रो मिशन तिर मद्दत गर्दछ।
डचटाउन मुख्य सडकहरु पनि अब बनाउन को लागी अवसर प्रदान गरीरहेको छ आवर्ती मासिक दान! "स्थायी दान" बटन क्लिक गर्नुहोस् र हामी प्रत्येक महिना स्वत: तपाईंको छनौट रकम प्राप्त गर्नेछौं।
Dutchtown Main Streets एउटा 501(c)(3) नाफामुखी संस्था हो। तपाईंको दान कर कटौती योग्य हुन सक्छ - आफ्नो कर पेशेवरसँग परामर्श गर्नुहोस्।
डचटाउन मुख्य सडक 'काम को बारे मा पढ्नुहोस्
२०२० को दौरान र एक विश्वव्यापी महामारी को बावजूद, डचटाउन मुख्य सडकहरु नयाँ गति प्राप्त, नयाँ स्वयंसेवकहरु लाई आकर्षित, हाम्रो व्यापार समुदाय लाई समर्थन गर्ने नयाँ तरीकाहरु भेट्टाए, र एक राम्रो डचटाउन को निर्माण जारी राखे। तिमी सक्छौ समीक्षामा हाम्रो वर्ष पढ्नुहोस् or एक पीडीएफ संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्.
दान गर्न अन्य तरिकाहरू
यदि तपाइँ तपाइँको दान मेल गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँको चेक देय "डचटाउन मुख्य सडकहरु" लाई निम्न ठेगानामा पठाउनुहोस्:
तपाइँ पनि पेपैल मार्फत pay@dt2stl.org लाई पैसा पठाएर प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। यस विधि मार्फत दानले हामीलाई दुबै अतिरिक्त शुल्कबाट बचाउँछ।
यदि तपाईं आफ्नो दान गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ, कृपया नहिचकिचाउनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
नगद दान प्रदान गर्न सक्नुहुन्न?
ठिकै छ! हामी अझ पनी तपाईंको सहयोग प्रयोग गर्न सक्दछौं। मद्दतको लागि उत्तम तरिका हो एक समितिमा सम्मिलित, जहाँ तपाईं आफ्नो विचार, प्रतिक्रिया, र कौशल योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यहाँ अन्य तरिकाहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो समय र उर्जालाई योगदान दिन चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस र हामी तपाइँको लागि एउटा ठाउँ भेट्टाउनेछौं।
पहिले DT2 को रूपमा चिनिन्छ
यदि तपाइँ DT2 लाई दान गर्दै हुनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् - डचटाउन मुख्य सड़कहरु को लागी मात्र एक नयाँ नाम हो र उहि संगठन को एक विकास हो। केहि क्रेडिट कार्ड कथन अझै पनी DT2 नाम प्रतिबिम्बित गर्न सक्छौं किनकि हामी हाम्रा कार्यक्रमहरु लाई अपडेट गर्न जारी छ।
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो मार्च 8th, 2022 .
डचटाउन STL.org डचटाउन मुख्य सडकहरु लाई दान गर्नुहोस्